अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । प्रायः सधैँ घाटामा रहने चालू खाता बचतमा पुगेको छ । विप्रेषणको वृद्धि र कोभिडका कारण आयातमा कम दबाब परेकाले चालू खाता बचतमा पुगेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार चालू खाता २६ अर्ब सात करोडले बचतमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता रु. २२ अर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको थियो । विगतमा चालू खाता कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतसम्म घाटामा थियो ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २० करोड तीन लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा २१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.६७ अर्ब ६३ करोडले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. आठ अर्ब ८३ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सात करोड ८५ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ५६ करोड ६२ लाखले बचतमा रहेको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
नागरिकता नुहँदा भूकम्पले भत्किएको घर बनेन,वृद्धाको छाप्रोमै बास
कर्मचारी समायोजन अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव
सरकारी निकायलाई होटलमै आवासीय कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध